India dia nampiakatra ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina hatrany amin'ny 85% amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » India dia nampiakatra ny fahafahan'ny zotram-piaramanidina hatrany amin'ny 85% amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovaom-panjakana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
India dia nampiakatra ny fahaizan'ny zotram-piaramanidina hatrany amin'ny 85% amin'ny ambaratonga mialoha ny COVID
Ny fanovana nambaran'ny minisiteran'ny fiaramanidina sivily dia hahafahan'ny mpitatitra fiaramanidina karana hivezivezy amin'ny sidina bebe kokoa ary hampiakatra ny enta-mavesatry ny mpandeha amin'ny fiatombohan'ny fetim-pirenena amin'ny volana ho avy.
Manalefaka ny fameperana mandritra ny vanim-potoana COVID amin'ireo mpitondra fiaramanidina anatiny ao amin'ny firenena ny governemanta Indiana.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka indiana izao dia avela hiasa amin'ny 85 isan-jaton'ny fahaiza-manaony alohan'ny areti-mifindra.
Ny zotram-piaramanidina indiana dia avela ihany koa hametraka ny saran-dalany manokana amin'ny tapakila mihoatra ny 15 andro amin'ny daty famandrihana.
Ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily ao India dia nampiakatra ny saran'ny fahaizan'ny mpitatitra fiaramanidina an-trano anio, ahafahan'ny zotram-piaramanidina Indiana hiasa amin'ny 85% amin'ny fahafaha-manao COVID-19 fa tsy 72.5% ankehitriny.
Ny manampahefana misahana ny fiaramanidina sivily dia nanova ny raikipohy takatry ny vidiny, mamela ny orinasam-pitaterana an-toerana hametraka ny saran-dalany manokana mihoatra ny dimy ambin'ny folo andro amin'ny datin'ny famandrihana.
Mandra-pahatongan'ny fanitsiana anio, ny takelaka vidiny dia azo ampiharina amin'ny tapakila hatramin'ny 30 andro hatramin'ny daty famandrihana.
Ireo fanovana nambaran'ny Minisiteran'ny fiaramanidina sivily hamela ireo mpitatitra fiaramanidina karana hivezivezy misimisy kokoa ary hampiakatra ny enta-mavesatry ny mpandeha amin'ny fiatombohan'ny fetim-pirenena amin'ny volana ho avy.
Ny fifamoivoizana an-habakabaka India dia nitombo 34% ka hatramin'ny 6.7 tapitrisa tamin'ny volana aogositra nifandimby tao aorian'ny fitomboan'ny fahafaha-manao hatramin'ny 72.5%.
Ny fitomboan'ny vaksiny sy ny fitakiana fitiliana COVID-19 dia nanampy ihany koa. Ny fipetrahan'ny seza manerana ny indostria koa dia nitombo hatramin'ny 70% tamin'ny volana lasa teo.
Ny fanalefahana ny fahaizan'ny sidina sy ny fanalefahana ny fameperana ny vidiny dia tonga taorian'ny fifampiraharahana marobe teo amin'ny Ministeran'ny fiaramanidina sivily sy ny CEO an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka India.
Ny firosoana amin'ny fahafaha-manao sy ny sarany dia nampizara roa ny indostria tamin'i Ronojoy Dutta, CEO an'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka lehibe indrindra any India Indigo, miantso ny fanafoanana ny fitsabahan'ny governemanta amin'ny vidiny sy ny fahaizany, milaza fa manakana ny zotram-piaramanidina handray fanapahan-kevitra miorina amin'ny varotra izany.
Ny mpandraharaha ny seranam-piaramanidina lehibe indrindra eto amin'ny firenena —Delhi, Mumbai, Bangalore - dia nanentana ny governemanta mba hampitsahatra ny sarany amin'ny fahaiza-manao sy ny vidiny satria manakana ny fiverenan'ireo mpandeha izany ary manimba ny vola miditra amin'ireo seranam-piaramanidina manana fananana manokana any India.